ဒုရဲမှူး မိုးရန်နိုင်ကို ရဲစည်းကမ်း ဥပဒေဖြင့် ထောင်ဒဏ် တစ်နှစ်ချပြီး အင်းစိန် ထောင်ပို့ထာ?? - Yangon Media Group
ဒုရဲမှူး မိုးရန်နိုင်ကို ရဲစည်းကမ်း ဥပဒေဖြင့် ထောင်ဒဏ် တစ်နှစ်ချပြီး အင်းစိန် ထောင်ပို့ထာ??
ရန်ကုန် ၊ ဧပြီ ၂၉
ဒုရဲမှူးမိုးရန်နိုင်ကို ရဲစည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေး ဥပဒေဖြင့် ထောင်ဒဏ်တစ်နှစ်ချပြီး အင်းစိန်ထောင်ပို့ထားကြောင်းသိရသည်။ မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့၊ သတင်း ပြန်ကြားရေးတာဝန်ရှိသူရဲမှူးကြီး မျိုးသူစိုးက ”ဒုရဲမှူးမိုးရန်နိုင်က ရဲစည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးဥပဒေ အရပြစ်ဒဏ်ချလိုက်ပြီးတော့ အခုအင်းစိန်ထောင်ပို့ထားတာဟုတ်ပါတယ်။ ချခဲ့တာတော့ ရဲတရား ရုံးမှာပါ”ဟု ဒီမိုကရေစီတူဒေးသို့ ဧပြီ ၂၉ ရက်က ပြောသည်။
သတင်းအချက်အလက်များ ကိုခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ မီဒီယာနှင့် တွေ့ဆုံပြောကြားခဲ့သည့်အတွက် ထောင်ဒဏ်ချမှတ်ရခြင်းဖြစ် ကြောင်း ၎င်းကဆက်လက်ပြောသည်။ ဒုရဲမှူးမိုးရန်နိုင်၏ဇနီး ဒေါ်တူးတူးက ”ထောင်တစ်နှစ်ချ တာ အတိအကျမသိသေးပါဘူး။ ရဲတပ်ဖွဲ့ကလည်း အကြောင်းပြန်တာမရှိပါဘူး”ဟု ဒီမိုကရေစီတူ ဒေးသို့ ပြောသည်။ ဒုရဲမှူးမိုးရန်နိုင်အား ရာထူးချပြီးရဲတပ်ဖွဲ့မှထုတ်ပယ်ခြင်း ရှိ၊ မရှိမေးမြန်းသည်ကိုမူ ရဲမှူးကြီး မျိုးသူစိုးက အတိအကျဖြေကြား ခြင်းမရှိပေ။ ဒုရဲမှူးမိုးရန်နိုင်၏ညီ ကိုရဲဝင့်နိုင်က ”ထောင်တစ်နှစ်ချတာ တော့ အတွင်းရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေက ပြောလို့သိရပါတယ်။ ရဲတပ်ဖွဲ့က နေအကြောင်းတော့ မကြားပါဘူး။ ရဲစည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးဥပဒေ နဲ့ထောင်ချလိုက်တော့တစ်ခုတော့ သေချာသွားတာပေါ့။ တပ်ဖွဲ့စည်း မျဉ်းစည်းကမ်းအရ အရေးယူတာ ကိုတော့ ဘာမှမဝေဖန်လိုပါဘူး” ဒီမိုကရေစီတူဒေးသို့ ပြောသည်။
ဒုရဲမှူးမိုးရန်နိုင်သည် ရိုက်တာသတင်းထောက်နှစ်ဦးကို ထောင် ချောက်ဆင်ဖမ်းဆီးခဲ့ခြင်းဖြစ် ကြောင်း ဧပြီ၂ဝ ရက်ရုံးချိန်းက တရားခွင် အတွင်းထွက်ဆိုခဲ့ ကြောင်း၊ ၎င်း၏ထွက်ဆိုချက်ကို မယုံကြည်ထိုက်သော သက်သေအဖြစ် တရားလိုရှေ့နေက တရားသူကြီးထံလျှောက်ထားခဲ့ပြီး မေ ၂ ရက်တွင်ကြားဖြတ် အမိန့်တစ် ရပ်ချသွားမည်ဖြစ်သည်။ ယင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီး ရိုက်တာသတင်းထောက်နှစ်ဦးဘက် မှလိုက်ပါဆောင်ရွက်ပေးနေသည့် တရားလွှတ်ရှေ့နေဦးခင်မောင်ဇော်က ”ရုံးရှေ့မှာဒုရဲမှူးမိုးရန်နိုင်ထွက်သွားတဲ့အရတော့ သူတို့အထက်ကနေ ပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့အမိန့်ပေါ့။ ရဲစည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးအက် ဥပဒေမှာ အခါအားလျော်စွာပြဋ္ဌာန်းတယ်။ ဒေသအလိုက်ပြဋ္ဌာန်း တဲ့အမိန့်တွေကို မလိုက်နာရင် အပြစ်ပေးတဲ့ပုဒ်မ။ ရုံးရှေ့မှာ သူ ပြောသွားတာကတော့ သတင်း ထောက်တွေနဲ့စကားမပြောပါနဲ့ ဆိုတာကို ပြောလို့။ ဒါပေမဲ့ သူက အယူခံခွင့်တို့၊ ပြင်ဆင်ခွင့်တက်ခွင့်တို့ရှိတယ်။ ဒုရဲမှူးမိုးရန်နိုင် တရား ခွင်မှာပြောသွားတဲ့စကားတွေက ဟိုမှာအပြစ်ပေးတာလိုက်နဲ့မှား ယွင်းတာမဖြစ်ဘူး။ ဒီဘက်မှာ ပျက်သွားတာမရှိဘူး။ မေ ၂ ရက် မှာသူ့တရားရုံးမှာ လာအစစ်ဆေး ခံပါဦးမယ်”ဟု ဒီမိုကရေစီတူဒေးသို့ ပြောသည်။
မြန်မာနိုင်ငံအခြေစိုက်ရိုက်တာသတင်းဌာနမှ သတင်းထောက်သက်ဦးမောင်(ခ)ဝလုံးနှင့် ကျော်စိုးဦး(ခ)မိုးအောင်တို့နှစ်ဦးသည် ၂ဝ၁၇ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာ ၁၂ ရက်ညပိုင်းက မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ် အမှတ်(၃)လမ်းမကြီးအတိုင်း လမ်းလျှောက်လာစဉ် ရဲတပ်ဖွဲ့မှ ရှာဖွေစစ်ဆေးခဲ့ရာ ရခိုင်ဒေသ နှင့်ပတ်သက်သည့် သတင်းအ ချက်အလက်များ၊ တပ်ဖွဲ့နှင့်ဆိုင်သည့် အရေးကြီးလုံခြုံရေးစာရွက် စာတမ်းအထောက်အထားများ ¤င်းတို့ထံမှတွေ့ရှိခဲ့သည်ဟုဆို ကာဖမ်းဆီးခဲ့ပြီး မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်၊ ထောက်ကြန့်နယ် မြေရဲစခန်းမှ (ပ) ၁၂၉၈/ ၂ဝ၁၇၊ ၁၉၂၃ ခုနှစ် မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရ လျှို့ဝှက်အက် ဥပဒေပုဒ်မ-၃ ဖြင့် အမှုဖွင့်အရေး ယူခဲ့သည်။ အဆိုပါဖြစ်စဉ်တွင်ပါဝင် ပတ်သက်သူလုံခြုံရေးရဲတပ်ဖွဲ့ခွဲမှ ဒုရဲမှူးမိုးရန်နိုင်နှင့်ရဲတပ်ကြပ်ကြီး တစ်ဦးကိုအရေးယူသွားမည်ဖြစ် ကြောင်း ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန မှ သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
မွေးရပ်မြေတွင် ရေဆိုးသန့်စင်စက်ရုံ တည်ဆောက်ရန် လှူဒါန်းခဲ့သော ဆာလက်